Jesubi: Taranaky ny fangatahana tsotsotra | Martech Zone
Jesubi: Taranaka fitakiana tsotsotra
Alatsinainy Martsa 21, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha ivon'ny fitantanananao ny taranaka fitakiana ny CRM anao dia mety ho sosotra ny ekipanao amin'ny fotoana laniny amin'ny fidirana data fa tsy mikolokolo fitarihana sy miasa akaiky. (Fantatro fa taloha aho!)
Jenny Vance sy ny ekipany ao LeadJen dia sosotra tokoa ka Jesubi manangana front-end izay nanatsotra ny fizotrany be.
Ity misy topy topimaso momba ny fampiasan'ny LeadJen an'i Jesubi:
Tao anatin'ny LeadJen, fahombiazana lehibe ny fampiharana ny Jesubi:
Tamin'ny 2006, ny LeadJen dia salanisa 7.2 mikasika isan'ora isaky ny mpiasa - fikitika ny fandefasana mailaka, fandefasana mailaka na resaka mahomby amin'ny fampiasana teknolojia nentin-drazana toy ny Salesforce.com, Netsuite na Microsoft CRM.
Tamin'ny aprily 2007, namoaka ny kinova Jesubi voalohany izahay ho an'ny fampiasana anatiny an'ny LeadJen. Tao anatin'ny 30 andro voalohany, ny famokarany dia nitsambikina avy tamin'ny fikasihan'ny 7.2 isan'ora mikasika 17 mahery isan'ora - fiakarana mihoatra ny 200%.
Tena tsara ilay lampihazo, raha ny tena izy, izao dia vokatra ampiasany sy amidiny. Niitatra i Jesubi ary mifanaraka ankehitriny Salesforce, Microsoft ary Netsuite CRM. I Jesubi dia hafa Orinasa Marketing mizana eto afovoan'i Indiana.
I Jesubi dia navaozina tamin'ny 2013 ary ankehitriny Salesvue LLC. Afaka mianatra bebe kokoa momba ny tanindrazany ianao fampiharana varotra mandeha amin'ny varotra ao amin'ny App Exchange.
Aza miantso ny mpivarotra fa kamo!
Mitady fahafaham-po amin'ny automatisation marketing